Ukuthuthukisa Izixazululo Zesoftware nge-Horizon Oasis | Izindaba zeWindows
Ukuthuthukisa i-Software Solutions nge-Horizon Oasis
Izindaba zeWindows | | Software
I-inthanethi ithathe ithuba eliphelele lokusilethela amapulatifomu asezingeni eliphansi avumela ukuphathwa okulinganayo ngabasebenzisi abafanayo abasebenzisa lezi zinhlaka. Injalo-ke le ndaba ye- IHorizon Oasis, inkampani ephethe ukunikela ngezixazululo zesoftware ukuletha ubuchwepheshe be-blockchain nobuhlakani bokufakelwa busondele ndawonye ezinkampanini eziningi zezinkampani emhlabeni wonke ngenhloso yokufukula osomabhizinisi abasendleleni eya empumelelweni.
1 Kepha… Yini iHorizon Oasis?
2 I-Intanethi, i-blockchain nobuhlakani bokufakelwa!
3 IHorizon Oasis idala futhi ithuthukise imikhiqizo yobuchwepheshe obuphezulu
4 Umbono we-Horizon Oasis
Kepha… Yini iHorizon Oasis?
Ikomkhulu le-United Arab Emirates (Dubai), IHorizon Oasis yazalwa e2019 sibambene nesakhe UMSUNGULI uCristian Carmona obekade ehamba phambili kwinani elikhulu lamaphrojekthi ahlobene nokwenziwa kobuchwepheshe obusha obuqhamuka nemikhiqizo emisha engadala inani kubantu. UCristian ukhomba ukwabiwa kwamandla ezwe njengensika eyisisekelo yokunika abantu amandla nokuhola izinguquko ezinkulu emhlabeni.
I-Intanethi, i-blockchain nobuhlakani bokufakelwa!
Njengoba sishilo ngenhla, eminyakeni yamuva nje inhlangano ekwazi ukuqeda zonke izithiyo ezikhona lapho kufinyelelwa kubuchwepheshe obuthile ivusiwe futhi yilokho kanye okuhlinzekwa yi-blockchain ngokuhlanganisa abantu ohlelweni lwezemvelo lokubusa kwezenhlalo olungagwema ukukhwabanisa ekwenzeni izinqumo iqembu elithile labantu.
IHorizon Oasis idala futhi ithuthukise imikhiqizo isebenzisa ubuhlakani bokufakelwa nobuchwepheshe be-blockchain ukusheshisa ukukhula kwenani elikhulu lamaphrojekthi emhlabeni jikelele futhi ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ulwazi lomsebenzisi kuzo zonke izici; Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukwengeza inani elikhulu lezinhlelo nokwenza lula izinqubo zokuhambisa ukusebenza kwamapulatifomu namawebhusayithi.
IHorizon Oasis idala futhi ithuthukise imikhiqizo yobuchwepheshe obuphezulu
Nethimba lochwepheshe bezobuchwepheshe IHorizon Oasis inabathuthukisi abakhulu nonjiniyela ku-blockchain ukuletha imikhiqizo nezinsizakalo ezingakwazi ukuxazulula izinkinga futhi zishayele imibono emisha emhlabeni wedijithali. Ububanzi bamathuluzi le nkampani engayakha futhi ithuthukise banzi impela; Ngezansi sikukhombisa okuncane okulethwa yi-Horizon Oasis ukuzibeka njengenkampani ehola phambili ekwakhiweni kobuchwepheshe obusha nezixazululo ezindabeni zedijithali
Phakathi kwayo yonke imikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa yiHorizon Oasis yezinkambu ezahlukahlukene zedijithali, singagqamisa le mikhiqizo elandelayo ku-blockchain ecosystem, ukwenziwa kwezivumelwano ezihlakaniphile ku-Ethereum blockchain, ukuthuthukiswa kobufakazi bezicelo zesigxobo, izicelo zesikhwama semali, amarobhothi nama-algorithms ebhizinisi, ama-master node, ama-node wokuqinisekisa, amaqembu ahlakaniphile, phakathi kwezinye izinketho eziningi zokunikeza ngamathuluzi anenani eliphakeme aqhubeka ngokuthuthuka ukuze kuzuze bonke osomabhizinisi abafuna ukuya ezingeni elilandelayo.
Umbono we-Horizon Oasis
Njengoba sibonile, IHorizon Oasis ivelele ekwenzeni ubuchwepheshe besimanje bufinyeleleke kubo bobabili ochwepheshe nabaqalayo. ukuqinisa ifilosofi ebandakanya wonke umuntu ebonakalise le nkampani kusukela yazalwa, yingakho nsuku zonke bekhathalela ukudala nokwakha imikhiqizo ngaphansi kwezindinganiso ezisezingeni eliphakeme kakhulu kucatshangelwa izidingo zamanje zemakethe, banikela ngamathuluzi abalulekile ukukhuthaza ukukhula kwezinkampani ezincane nezinkulu ezungezile Umhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zeWindows » Software » Ukuthuthukisa i-Software Solutions nge-Horizon Oasis
Ukunakekelwa okukhulu! Lokhu kwenzeka uma uzama ukufaka iWindows 11 kukhompyutha engasekelwa